Mirehareha amin’ny inona ? | NewsMada
Mirehareha amin’ny inona ?
Izao tontolo izao mihitsy no misaona manoloana ny fahalasanan’i Koffi Annan, sekretera jeneraly teo aloha ny Firenena mikambana. Mipetraka ho tantara ny zava-bitany, indrindra, amin’ny ady ho an’ny fandriampahalemana sy ny zon’olombelona. Misaona manokana ihany koa i Afrika satria anisan’ireo reharehan’ity kaontinanta ity izany lehilahy izany. Izy mantsy no Afrikanina voalohany, nitana izany andraikitra goavana izany.
Raha hiresaka ireo olo-malaza (tsara), mandainga izay milaza fa tsy hanan-kambara isika Malagasy. Izao anefa, eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina sy ny zavakanto ny ankamaroan’izy ireny. Mpanoratra, mpitendry zavamaneno, mpihira, sns. Tsy mitsanga-menatra isika raha ireo.
Raha ny tontolon’ny politika sy ny fampandrosoana ny firenena kosa no ampitahaina amin’ny an’ny hafa, toa mampite hisitri-belona avy hatrany. Samy manana hotanisaina ny mpitondra nifandimby teto ny amin’izay kely vitany : sekoly, lalana, tetezana, tohodrano, sns. « Kely » ireo satria tsy ny fotodrafitrasa nitsangana no hitsarana ny fahombiazana fa ny fiantraikan’izany amin’ny fiainam-bahoaka.
Angamba, tsy misy atoro intsony ny fahantrana lalina iainan’ny ankamaroan’ny Malagasy, ankehitriny. Mibaribary ny fandrobana harem-pirenena, manjaka ny kolikoly sy ny kiantranoantrano. Be ny olana tsy ahitana na tsy itadiavam-bahaolana … Tsy manana olomanga, mpitondra mahay azo ireharehana, ny Malagasy.
Efa mandeha sahady moa ny andran-tsira amin’ny fampielezan-kevitra, amin’izao fotoana izao. Samy mitanisa izay hany vitany ary mirehareha amin’izany ireo efa nandalo teo amin’ny fitantanana ny firenena. Tsy tokony hisioka anefa, raha tsy tafavoaka ny ala, ala mikitroky ny fahantrana.
Toy ny any amin’ny ankamaroan’ny tany an-dalam-pandrosoana sy noho ny tsy fisian’ny foto-kevitra politika mazava eto amintsika, mitombo isan’andro ny isan’ny kandidà ho filoham-pirenena. Efa 20 be izao. Miankina amin’ny safidin’ny tsirairay ny hananan’ny taranaka, any aoriana, olomanga, reharehany. Hatreto aloha, henatra no itafiana.